संरक्षणको बहानामा नदी दोहन हुंदा सरोकारवाला मौन | गृहपृष्ठ
Home प्रदेश समाचार संरक्षणको बहानामा नदी दोहन हुंदा सरोकारवाला मौन
on: ११ चैत्र २०७५, सोमबार १३:२७ प्रदेश समाचार
चैत ११, म्याग्दी । नदीजन्य वस्तुको उत्खनन्मा डोजर, एक्साभेटर जस्ता भारी उपकरणको प्रयोग गर्न कानूनले निषेध गरेको छ । म्याग्दीका कालीगण्डकी र अन्य नदीमा बजार र वस्ती संरक्षणका नाममा खुल्ला रुपमै त्यस्ता उपकरण प्रयोग भैरहे पनि सरोकारवाला निकाय मौन छन् ।
उत्तरबाट दक्षिणतर्फ बगिरहेको कालीगण्डकी नदीको बेनी खण्डमा बेनी बजार संरक्षणका नाममा नदीको छेउछाउ र बीच भागमा रहेका ठूल्ठूला ढुंगा फुटालेर नदीको सौन्दर्य नष्ट गर्ने काम भएको छ । बेनी क्षेत्रको कालीगण्डकी नदीको प्रशस्तै दोहन भइरहेको स्थानीयवासीले बताएका छन् । बजार संरक्षणका लागि पर्खाल लगाउने बहानामा जथाभावी नदी किनाराका ढुंगा र बालुवा निकाल्दा संरक्षण होइन जोखिमको सम्भावना बढेको भन्दै उनीहरुले बेनी नगरपालिकामा गुनासोसमेत गरेका छन् ।
बजारवासीको गुनासो अनुगमनका क्रममा पुष्टि भएपछि उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुलाई नगरपालिकामा बोलाएर जथाभावी ढुंगा ननिकाल्न र उपकरण प्रयोग नगर्न सचेत बनाइएको नगर कार्यपालिकाका सदस्य कृष्णकुमार विश्वकर्माले बताए । स्थानीय बासिन्दाको गुनासो आएपछि बेनी नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिलाई सचेत बनाएको छ । रुपाताल एकीकृत संरक्षण समितिमार्फत कालीगण्डकी नदी कटानबाट बेनी बजारलाई जोगाउने उद्देश्यले सञ्चालित योजनाका लागि उपभोक्ता समितिले एक्साभेटर प्रयोग गरेर नदी किनारका ठूला ढुंगा फुटाउँदा थप जोखिम बढेको भन्दै बजारवासीले विरोध जनाएका हुन् ।
बेनी नगरपालिकाका नगर कार्यपालिका सदस्य कृष्णकुमार विश्वकर्मा पनि नदीका ढुंगा फोडेर पर्खाल लगाएकामा निकै असन्तुष्ट छन् । विश्वकर्मा भन्छन् ‘यसरी बेनी बजारको संरक्षण कसरी हुन सक्छ रु पहिलो कुरा त नदीको स्वरुप र धार नै परिवर्तन गरिएको छ । पुराना, गहिरोसँग बसेका ठूल्ठूला ढुंगा फोडिएका छन् । दोस्रो ग्याबियन जाली लगाउने ठाउँमा जग नै खनिएको छैन । पानीको सतहमाथिबाट नै ग्याबियन पर्खाल लगाइएको छ । यो त कुखुरालाई बार लगाए जस्तै भयो ।’
म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष एवं बेनीका उद्योगी प्रमोदकुमार श्रेष्ठले पनि कालीगण्डकी नदीबाट ढुंगा निकालेर ग्याबियन लगाउनु उपयुक्त नभएको बताए । ‘हामीले उपभोक्ता समितिहरुलाई बारम्बार सचेत पारिरहेका छौं तर, उनीहरुले अटेर गरेका छन्’ श्रेष्ठले भने । बेनी बजार संरक्षणका नाममा भैरहेको यस्ता गतिविधिलाई स्थानीय प्रशासन र स्थानीय निकाय दुवैले टुलुटुलु मात्रै हेरिरहेका छन् । बजार संरक्षण गर्न ग्याबियन जाली लगाउने बहानामा उपभोक्ता समितिले घुमाउरो शैलीमा ठेकेदारमार्फत उपकरण प्रयोग गरेर नदीमा जमेर बसेका ठूल्ठूला ढुंगाहरु फोडिरहेको छ ।
नदीको स्वरुप र धार नै परिवर्तन गरेर मनपरि गरिरहेका उपभोक्ता समिति र अघोषित ठेकेदारहरुलाई न बजारवासीले रोकेका छन् न त सम्बन्धित् निकायले नै । कसको स्वार्थमा किन यसरी नदीको दोहन भैरहेको छ ? सम्बन्धित निकाय किन मौन छ ? यो रहस्यको विषय बनेको छ । रुपाताल संरक्षण समितिले बेनी बजार संरक्षणका लागि पुरानो पर्खाल संरक्षण र गत भदौको बाढीले बगाएको ठाउँमा ग्याबियन पर्खाल निर्माणका लागि ४ ओटा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गरिरहेको छ ।
बेनी बजार संरक्षणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रू.३ करोड ५० लाख विनियोजन भए पनि कुन उपभोक्ता समितिसँग कति बजेटमा सम्झौता भएको हो भन्ने बारेमा कार्यालय र समिति दुवैले सार्वजनिक गरेका छैनन् । ४ ओटा मध्ये ८ नं वडाको एउटा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष उत्तमकुमार कर्माचार्यले साना ढुंगा पर्खाल लगाउन प्रयोग गरेको र बजारवासीले गरेको आशंका सत्य नभएको प्रतिक्रिया दिए । उनले ग्याबियन जाली लगाउने ठाउँदेखि ४० मिटर वरपरका खेलुवा ढुंगाहरु प्रयोग गर्न पाइने सहमति भएको र सोहीअनुसार नै काम गरिएको बताए ।
तर, नदीको बीचमा गाडिएर रहेका ठूल्ठूला ढुंगाहरु समेत एक्साभेटरले निकालेर फोडिएकाबारे भने उनले केही बताउन चाहेनन । अध्यक्ष कर्माचार्यले भने,‘ ग्याबियन पर्खालका लागि ठूला ढुंगा हाल्नुपर्छ पनि भन्ने अनि ढुंगा निकाल्दा विरोध पनि गर्ने ? यो दोहोरो चरित्र के का लागि ?’ बेनी बजार संरक्षणका लागि म्याग्दी बेनीतर्फ कालीगण्डकी किनारमा ७६० थान ग्याबियन पर्खाल लगाइने सम्झौता भए अनुसार अहिले सोही अनुसार काम भैरहेको उनको दाबी छ । बजार संरक्षणका लागि चालु आवमा रू.३ करोड ५० लाख विनियोजन भएको भनिए पनि अध्यक्ष कर्माचार्यले पुग नपुग रू.३ करोडको हिसाब मात्र देखाउनुभयो ।
कर्माचार्यका अनुसार प्याकेज ‘ए’का लागि रू. ७३ लाख ८६ हजार ३ सय, प्याकेज ‘बी’ मा रू.७१ लाख ९ हजार, प्याकेज ‘सी’ रू.७१ लाख र प्याकेज ‘डी’ का लागि रू.७८ लाख रहेको छ । तर, बजेटको विषयमा बजारमा निकै कानेखुशी समेत हुने गरेको छ । उपभोक्ता समिति र निर्माण कम्पनीले यथार्थ बजेट सार्वजनिक नगरेको भन्ने गुनासो व्यापक छ । रासस
म्याग्दीका खेतबारीमा सुन्तला र केराका बिरुवा
१६ चैत्र २०७५, शनिबार ११:५७
एकै वडामा पाँच सिँचाइ आयोजना निर्माण शुरु
८ चैत्र २०७५, शुक्रबार १२:५२